Obungase ungakwazi ngomzwilili wejazz uSbongile Khumalo – Bayede News
Kubaculi bethu eNingizimu Afrika kukhona intokazi ethi uma icula kube sengathi ulalele umzwilili uqobo. Kungabe okuculwayo kususelwe kokungamasiko nemvelaphi yaboHlanga noma kungamaculo ahlatshelelwa ngamakhwaya adumile intokazi le ikukhiphela unqambothi. Inendlela yokwenza umculo obungawucabangi uzwakale unesigqi sejazz. Okukhulunywa ngaye lapha wuSbongile uMaMngoma Khumalo. Le ntokazi eyazalwa ngowe-1957 iyindodakazi kaSolwazi womculo uKhabi Mngoma ngakho kuyazicacela ukuthi umculo usemizweni yayo. Okuhle ngaleli ciko eligxile kujazz wukuthi nalo alizithambisanga ezifundweni zomculo. Lihlome ngeziqu zeBachelor of Arts in Music elazithola e-University of Zululand lanezela ngezeHonours kuwona umculo zona ezatholakala e-University of Witwatersrand eGoli. Ukuhlabana kwezomculo uMaMngoma wakuqala kudala ehlonishwa kuGrahamstown manje esiyiMakhanda Arts Festival. Lapho waqokwa njengeStandard Bank Young Artist Award. Unyaka kwakungowe-1993. Ngowezi-2009 wabizelwa ukuzochonywa uphaphe lwegwalagwala eRhodes University ezothweswa iziqu zobudokotela kuwona umculo kanti ne-University of Zululand izomgila okufanayo.
Abamhloniphayo uMaMngoma bakwenza kufanele ngenxa yemisebenzi ayenzile ngama-albhamu asewaqophile. Wazibula nge-Ancient Evenings ngonyaka we-1996 wangabe esabheka emuva. I-albhamu yakhe yakamuva inesihloko esithi, Breath of Life kanti yona wayidedela ngowezi-2016 ibe ilama amanye ama-albhamu amnandi futhi. Ziningi izingoma eziculwa yile ntokazi abanye abaculi bejazz abazidlala ngezinsimbi aﬁ ke yena azinonge ngephimbo. Eziseduze ezikhumbulekayo yileyo kaMoses Tawuwa Molelekwa ayeyidlala ngopiyano iMountain Shade Kanye nethi Yakhal’ Inkomo uWinston Mankunku Ngozi ayifutha ngecilongo. Le ntokazi isijabulise izihlwele ngezihlwele emhlabeni kusuka eRoodepoort kuya eRoyal Albert Hall eLondon. Phakathi kwemicimbi aseke wacula kuyo kukhona owalowo owayenguMengameli uNelson Mandela egubha iminyaka engama-95 nangesikhathi egcotshwa ngowe-1994. Kwaphinde kwaba nguye uMaMngoma owayehola iculo lesizwe laseNew Zealand nelakuleli emdlalweni weNdebe YoMhlaba yeRugby ngowe-1995.
Uzinikele kakhulu nasekufukuleni intsha kwezomculo. Lokho kubonakala ngokuzihlanganisa kwakhe neFuba Academy neMadimba Institute of Music eseSoweto. Uyakuthanda nokucula i-Opera okubonaka ngokuqopha kwakhe uShaka kaSenzangakhona nokungumsebenzi kaMzilikazi Khumalo kanti useke wacula njengemezzo-soprano soloist kuVerdi Requiem eyalethwa yiLondon Bach Choir lapha eNingizimu Afrika. Kubantu uMaMngoma akhule ebalalela kubalwa uLetta Mbulu, uMirriam Makeba, uMaria Callas noRoberta Flack ukubala babe mbalwa. Nokushaywa kwezigubhu eZion Christian Church kumkhuthaze kakhulu. Ufunde umculo ngaphansi kuka-Emily Motsieloa lapho efunde ukudlala khona iviolin, umculo, idrama nedance. Usehlonishwe ngeNdondo i-Order of Ikhamanga in Silver lapho kwatuswa khona igalelo lakhe ngale Ndlela: “Umnikelo wakhe ekuthuthukisweni kwezobuciko namasiko eNingizimu Afrika emkhakheni wejazz ne-opera.” USbongile Khumalo (uMaMngoma) wazalelwa eSoweto ngowe-1957.
Kwabanye babaculi aseke wabambisana nabo kunoBhekumuzi Luthuli (ongasekho) kanti useke wagibela esteji esisodwa noThandiswa Mazwai. Umuntu oyikhuluma uyizwe indaba kaSbongile Khumalo nosizo ayilo kwabanye abantu ngomunye umzwilili wejazz uGloria Bosman. Uvele athi nje, “Ukube wayengekho uSbongile, ngangingeke ngibone izinto eziningi kangaka emhlabeni. Empeleni babili bathathu abaculi abangakaze baluthole usizo uma beludinga kuSbongile Khumalo,” kubeka uGloria Bosman.